Aqoonso Magaca Lugood Songs 'la Tunatic freeware
> Resource > Lugood > Sheeg Magaca Lugood Songs 'la Tunatic
Aqoonso Magaca Lugood Songs 'la Tunatic
Waxaa jira heeso badan ee aad Lugood maktabadda in aanad garanayn xataa magacooda? Hadda waxaad karaa aqoonsado kasta song Lugood for free la freeware Tunatic. Kaliya xiriir internet oo makarafoonka (optional) looga baahan yahay.
Qalab A weyn si loo aqoonsado songs ayaa halkan jooga. Waxaa ka heli warbixin aad u Lugood maktabadda si toos ah iyo kuu ogolaanayaa inaad Cudarada macluumaadka si faylasha, si aad u yeelan kartaa maktabad Lugood wanaagsan loo soo abaabulay meel kasta sida Lugood, Mac, iPhone oo dheeraad ah. Baro More >>
Aqoonso Lugood Songs la Tunatic
Talaabada 1: Download iyo rakib Tunatic
Tunatic waa cross-madal aqoonsi song labada Mac iyo Windows. Waxaa Download halkan. Tunatic u baahan yahay il dhawaaqa in ay ka shaqeeyaan. Makarafoonka An dibadda qabsan doonaan song for ogaado. Haddii aadan haysan makarafoon dibadda, hubi this:
1. Haddii aad si toos ah u ciyaaro music ka your computer, ugu kaararka dhawaaqa PC kuu ogolaanaysa inaad dooro "Waxa aad maqli" (sidoo kale loo magacaabay "rikoodh Mix" ama "Output Mixed") sida ku darsiga.
2. kombiyuutarada intooda Mac ay ka dhisay makarafoonka, taas oo macnaheedu yahay si toos ah aad u isticmaali karto Tunatic.
Talaabada 2: Play Music ee Lugood
Hadda ordi Tunatic iyo furi Lugood inuu u ciyaaro music aad rabto in la aqoonsado. Hubi in xiriir aad internet shaqeeyaa sida caadiga ah. Haddii signal waa itaal daranyahay, isku day in aad kor u qaadaysaa codka ah heesaha.
Talaabada 3: Tunatic tilmaamaysaa heesta.
Tunatic ee 'baadho' button Click, Tunatic soo diri doonaa qaababka song in ay server Tunatic ah. Server ayaa baadhaa ay database oo soo laabtay natiijada.
Song aqoonsi on iPod / iPhone / iPad / Android
Tunatic oo keliya ka shaqeeya Mac ama Windows computer. Haddii aad qabtid qalabka Apple ama telefoonada Android, waxa kale oo aad isku dayi kartaa SoundHound ama Shazam barnaamijyadooda si ay u aqoonsadaan songs Lugood.
Sida loo Calaamee MP3 Files in Your Big Music Collection Si fudud
Sida loo rescan iyo hagaajin maktabadda Lugood
Sidee u dhiska maktabadda Lugood
Sida loo Copy Qiimeynta iPhone Music & Play Tirada si Lugood